Fizahan-tany, Vietnam Silamo & Bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2017 4:04 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Marsa 2006 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
IranMehr miresaka momba ny olan'ny indostrian'ny fizahan-tany any Iran. Nanoratra izy na dia eo aza ireo manintona ao amin'ny firenena toy ny tsangambato mana-tantara, ireo tanàna fahiny, sy ny tontolo iainana. Miresaka momba ny politikan'ny governemanta hisarika mpizaha tany 20 tapitrisa ao Iran ihany koa izy, kanefa latsaky ny 1 isanjato ny vola miditra amin'ny fizahan-tany manerantany. Hoy izy:
“Ahoana ny fomba handrosoan'ny drafitry ny governemanta Iraniana ao anatin'ny” tolotra sy tinady” eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany mba hampivelarana ity indostria ity? … Ny petra-bolan'ny sehatra tsy miankina, ny tsy fahampian'ny toerana onenana, ny tsirin-kevitra ara-toekarena momba ny fizahan-tany tsy voafaritra, ny olan'ny fitaterana an'habakabaka, ny fandrosoan'ny fizahantany ao an-toerana, ny fandravana ny ampihimamban'ny governemanta amin'ny fizahantany… no anisan'ireo olana tokony hovahana, raha tsy izany, tsy hisy ny fampandrosoana ny fizahan-tany fototra ao amin'ny firenena. Tokony hanazava tsara ny toeran'ny firenena ao Afovoany-Atsinanana amin'ny fizahantany ny toeran'i Iran eo amin'ny andraikitra ara-pizahan-tany manerantany? “
Deyareaftab, bilaogera hafa namela fanehoan-kevitra mikasika ny fizahan-tany ao amin'ny IranMehr, nanontany izy hoe :
“Fizahan-tany inona? Tsy sahy ho avy ao Iran ny mpizahatany!”
Tajzade (Persiana), mpanao politika reformista & bilaogera, miresaka momba ny krizy nokleary sy ny vokatr'izany. Nilaza izy fa ny ilain'ny tanora Iraniana dia ny fandriampahalemana ara-tsosialy & ny fampandrosoana ara-kolontsaina. Tokony hajaina ny firenentsika. Mazava ho azy fa fihetsika iraisana ny fanajana ary raha tsy manaja ny hafa ianao dia tsy ho voahaja ihany koa. Hoy ilay bilaogera:
“Nampanantena hametraka an'i Iran ho Japana Islamika ny Absolutists (izay midika hoe governemanta ankehitriny) alohan'ny nahazoany fahefana … saingy noho ny fanarahana ny politikan'izy ireo, dia tsy ho lasa Korea Avaratra Islamika akory aza i Iran fa Vietnam Islamika! Alaivo an-tsaina hoe nanafika antsika i Etazonia ary nandresy tamin'ny ady isika tamin'ny farany. Inona no ho setrin'izany ho an'i Iran? Inona no hitranga amin'ny faha-30 taona ny fahombiazan'ny Repoblika Islamika ? “
Ho azy, ohatra tsara iray i Shina, firenena goavana nahazo ny hajany tamin'ny fifaninanana momba ny tsena malalaka.
Sibestan (Perisiana) indray nilaza fa diso fanantenana ireo bilaogera sasany ary tsy nibilaogy intsony satria nihevitra izy ireo fa hampisy revolisiona ny bilaogy. Nilaza ity bilaogera ity fa tsy manana halebiazana ara-tsosialy araka ny nantenain'izy ireo ny bilaogy saingy manana endrika lehibe maha-sangany azy. Lasa orinasa mpanaposaka hevitra izy ireo. Ny tiany ambara amin'ny hoe sangany dia ireo manam-pahaizana na ireo manao asa ara-tsaina, mpanoratra, mpanao gazety sy mpampianatra eny amin'ny oniversite.
Deltang (Persiana) indray mihevitra fa ho taona sarotra ho an'ireo bilaogera ity taona ity satria te hametraka ny blaogy amin'ny sehatra ara-dalàna ny governemanta! Milaza izy fa mihevitra ny bilaogy ho matotra ny governemanta ary mampiseho fa manitatra ny heriny eo amin'ny fiarahamonina ny bilaogy.